“WAAR HAYAAY” WAA WAREEY !!!
Miyaad Maqashen waxa maantana ka dhacay Hargeisa?
Ma waxay noqotay wixii danbi ay qaystaan dadka ku nool Hargeisa in loo xidhxidho beesha Gabooye?
Waar haddii aad toogateen ama aad qubteen ama aad tunteen ama aad laba qaar u kala qoyseen ma hadana tanaad ugu darteen?
Waxaanu aad uga xunahay in ay ka dhacday ama uu ku dhawaaqay taliyaha ciidamada booliska S.Land in la xidhxidhay dadka muwaadiniinta laga tirad badanyahey ee Beesha Gabooye ee birta tumma. Iyadoo loo eedaynayo in ay tumeen wixii ay farsamadoodu ahayd ee waligoodba ku shaqeysan jireen oo ah “MINDIYO”.
Hadaba mindi ma waxaa la xidhaa qofka danbi ku gala mise waxaa la xidhaa qofka sameeya? Waar japan iyo aduunka badidii ay mindi iyo hubka wax lagu qabsadaaba idiinka yimaadan oo Hargeisa dukaan kasta iyo aqalkasta iyo hudheelkastaba mindi iyo wax ka daraniba way yaalaan ee maxaa tilmaamay tan ay Gabooyuhu sameeyeen? Maxaase dad aan danbi la hayn loo xidhxidhay?
Waar mindida gabooyahu tumaan mooyee mid kale waxba ma dili karto miyaa?
Addunka waxaanu rabnaa in ay weydiiyaan booliska S.Land danbi maad gelin Gabooyoow mindi ayaad sameysay xukunka u yaal?
Mise arrintu waa waraabihii la yiri waraabow waxaa dhashaadii kaa dilay libaax ee yidhi maaha libaaxa ee waxa iga dilay sacaa cad?
Waxaan u sheegayna addunweynaha iyo waxgaradka S.Land, odayaasha, culumaaudiinka, iyo dulmi diidka reer S.Land in ay ka dhiidhiyaan dulmiga iyo u xoog sheegashada ay ku hayso dawlada iyo booliska S.Land dadka beesha Gabooye oo aanay noqon in ay nagu kalifaan wax aananu diyaar u ahayn, iyado oon idin xasuusinayno in wax walba tan leeyihiin.
Nasir Moxammed Ciise
Gudomiyaha Belaha Gabooye ee Qarada Yurub Iyo W/ America.